विश्व बैंकको यस्तो फैसलाले तालिबानलाई देश चलाउने हुने भयो सकस - Dainik Online Dainik Online
विश्व बैंकको यस्तो फैसलाले तालिबानलाई देश चलाउने हुने भयो सकस
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७८, बुधबार ११ : ००
विश्व बैंकले अफगानिस्तान परियोजनाको लागि सहयोग रकम प्रदान नगर्ने घोषणा गरेको छ। अफगानिस्नात कब्जा गरेपछि विश्व बैंकले यस्तो फैसला गरेको हो। विश्व बैंकका अनुसार तालिबान सत्तामा आएसँगै विकासको परियोजना खासगरी महिला अधिकारमा नकरात्मक असर पर्नेछ।
यसअघि आईएमएफले पनि अफगानिस्तानलाई सहयोग नगर्ने बताउँदा अमेरिकाले अफगानिस्तान सेन्ट्रल बैंकको सम्पत्ति जफत गरेको थियो। यसरी चारैतिरबाट आफ्नो सम्पत्तिमा हक नहुने भएपछि तालिबानलाई देश चलाउने सकस हुने देखिएको छ। आईएमएफले तालिबानलाई ऋण नदिने बताएको हो।
विश्व बैंकका एक प्रवक्ताले बीबीसीसँग भनेका छन्,‘हामीले अफगानिस्तानमा जारी राखेको सहयोग बन्द गरेका छौं। हामीले अफगानिस्तानको वर्तमान स्थितिको निगरानी गरी रहेका छौं। हामी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु र विकासमा संलग्न भएकासँग छलफल जारी राख्नेछौं। अफगानिस्तानका जनताको मद्दतको लागि हामी सक्दो प्रयास गर्नेछौं।’
दशैंका लागि असोज १० गतेबाट अग्रिम टिकट बुकिङ
काठमाडौं । सरकारले दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा घर जान चाहनेहरुका लागि असोज १० गतेबाट अग्रिम
काठमाडौं । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको विसं २०४६ को जन आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको
बर्दिया । बँदेल मार्न थापेको पासोमा परि एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको
काठमाडौं । एएफसी महिला एसियन कप छनोट २०२२ अन्तर्गत नेपालले आज फिलिपिन्सको सामना गर्दैछ ।
करिष्मा मानन्धरलाई केपी ओलीको फोन: परीक्षा कस्तो भइरहेको छ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष हाल संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा छन। सरकारमै रहँदा
विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : अमेरिकालेसँग हार्यो नेपाल
काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलामा अमेरिकाले नेपालसँग बदला लिएको छ।
हनुमान ढोकाबाट सुरु भयो इन्द्रजात्रा, लिङ्गो ठड्याएर इन्द्रध्वजोत्थान
काठमाडौं । इन्द्रजात्रा आजदेखि सुरु भएको छ। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको नाममा गरिने इन्द्रजात्राको
काठमाडौंमा खुल्न थाले स्कुल-कलेज, पद्मकन्या क्याम्पसमा ४ गतेबाट भौतिक उपस्थितिमै पढाई हुने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले असोज १ गतेदेखि स्कुल कलेज खुला गर्ने आदेश फिर्ता
देउवा सरकार अपदस्त गरेर देशलाई चुनावमा धकेल्न खोज्दैछन् ओली : मसाल
एकिकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा मेटमणि चौधरी चयन
शंकर पोखरेल विरुद्धको अपहरण मुद्धा बीचमै अड्कियो
बाघ पनि डराउने जीव हाइनाले मानिसलाई आक्रमण गरेपछि…(भिडिओ)
सङ्खुवासभा सामूहिक हत्या : पुरानो रिसइवीका कारण ६ जनाको ज्यान लिए
को हुन् ६ जनाको हत्या गर्ने लोकबहादुर ? किन लखेटी–लखेटी हत्या गरे ?